Archive du 20170913
Mirongatra ny pesta Tandrevaky ny Fanjakana
Efa nanomboka ny 28 aogositra 2017 no nahafantatra ny teo anivon’ny sehatry ny fahasalamana fa nanomboka tao Toamasina ny valan’aretina pesta amin’ny tratra (peste pulmonaire),
Fampihavanam-pirenena Hianiana izy 33 mianaka
Hotontosaina eny amin’ny lapan’ny Fitsarana an-tampony Anosy anio alarobia 13 septambra amin’ny 11 ora antoandro ny fianianan’ireo mpikambana 33 vaovao mandrafitra ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy).
Fitondrana HVM Mitohy ny fanampenan-tsofina
Anisan’ny nitsikerana matetika ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina hatramin’izao fa miorina eo ambonin’ny fitantanan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara
Mpanao politika ao Vakinankaratra Mitaky ny hidirana amin’ny Repoblika faha-5
Namoaka fanambarana ny vondron’ny mpanao politika mpisehatra amin’ny raharaham-pirenena avy ao Antsirabe omaly talata 12 septambra. Nifantoka manontolo amin’ny raharaham-pirenena ny votoatiny.
Miarahaba Jean a ! Tena tsara aloha ilay finiavana hanarina ny fandriampahalemana eto an-tanàna ary tena maha te hidera e !
Fikambanana Tantsaha Valin-tanana “Hafa ihany i Marc Ravalomanana”
An-jatony ny antoko politika misy eto Madagasikara, saingy mitondra inona eto amin’ny firenena ny fisiany ?
Tahotra ny fianakavian-dRajaonarimampianina Mihorohoro hatramin’ny Fitsarana…
Miverina ny resaka fanjakazakana ataon’ny fianakavian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Zoom Ankorondrano Hamokatra herinaratra manomboka izao
Notokanana omaly talata 12 septambra ny ivon-toerana famokarana herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro na «Centrale Solaire Photovoltaïque » teny amin’ny Zoom Ankorondrano.
Mpilatsaka an-tsitrapo Japoney 4 mirahavavy handao an’i Madagasikara
Nanao ny tatitry ny asa nanirahana azy ireo tao Vakinankaratra nandritra ny 2 taona ireo mpilatsaka an-tsitrapo Japoney niisa 4 mirahavavy niasa teto Madagasikara.
Atleta manana fahasembanana Anisan’ny sangany eto Afrika ny Malagasy
Nampahafantarina omaly talata 12 septambra tetsy amin’ny ANS Ampefiloha ny andinindininy mikasika ilay fifaninanam-pirenena eo amin’ny taranja ara-panatanjahantena ho an’ireo manana fahasembanana hotontosaina eto Antananarivo ny 14 ka hatramin’ny 17 septambra izao.
Telo volana dia mivaha ny delestazy, handray andraikitra ny fanjakana, efa mandeha ny fanadihadiana, afaka telo volana dia hahita vokatra azo tsapain-tanana isika …
FOARA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY FAMBOLENA Hotanterahina eny Tanjombato manomboka rahampitso
Hotanterahina manomboka rahampitso Alakamisy eny amin’ny Parc des expositions Forello Tanjombato, haharitra efatra andro ny foara iraisam-pirenena momba ny fambolena karakarain’ny agence de communication la premiere ligne sy ny Ministeran’ny Fambolena.
Hery Rajaonarimampianina Hotazonina amin’ny teniny
Natolotra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly talata 12 septambra teny amin’ny CCI ny drafitra momba ny fampandriana fahalemana PN-RSS novolavolaina tao anatin’ny 3 taona.
Andavamamba Hanokafana biraon’ny polisy vaovao
Ankoatra ny faritra 67 ha dia anisan’ny tanàna iray malaza ratsy amin’ny asa fanendahana sy ny sinto-mahery ny eny Andavamamba eny, efa ho herintaona mahery izao.